Qashin-fudud oo fudud oo jilicsan jilicsan ee adiga kuu ah - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • QODOBO • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • beauty • DARYEELKA CAAFIMAAD »Qalabka fudud-fudud oo fudud jilicsan ee adiga kugu habboon
Qashin fudud oo fudud oo jilicsan jilicsan ee adiga kugu habboon
KAMSEU BAUDOUIN 13 March 2019
Waxaan doonayay in aan kuu sheego oo ku saabsan dhirta ah oo macmal ah ka mid ah buluug ii by on Sunday marka aan run ahaantii doonayay in ay ii sameeyeen dhirta iyo waxaan lahaa gabi ahaanba waxba gacanta laga reebo sonkorta iyo saliidda saytuun ah ...
Qashin fudud oo fudud oo jilicsan jilicsan oo aad ubaahan tahay inaad ogtahay!
Waxay si fiican u tirtirtaa jirka, cagaha, jilbaha, xusullada iyo wax kasta oo aad rabto ... Waxaan xitaa isku dayay wajiga si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii si tartiib ah iyo maqaarkeygaba si dhammeystiran ayay u dhigteen. Natiijooyinka: maqaarka jilicsan, satiny oo ku jira daqiiqado 5.
Wixii shuban cajiib leh waxaad u baahan tahay maaddooyinka 2: sonkorta iyo saliidda sayniska (loo yaqaan iyo aqoonsaday awooddeeda qoyan).
Iyada oo maadooyinkan 2, waxaad u baahan tahay koob ama baaquli, gaaban weel yar.
Dhinacayga, waxaan qaatay koobka Koobka George (waxaa loola jeedaa Nespresso nasiib daro laakiin waa mid aad u macquul ah).
Waxaan ku sameeyay faraha caaradeyda jaantus yar si aan u sharaxo khiyaanada oo dhan.
Ka dib marka aad soo jeedin Roob (ama meel kasta oo aad rabto in aad waayo, xaalkan in) aad qoysid maqaarka, aad si tartiib ah qas farahaaga iyo tagaan bood isku dar ah waxaa laga codsadaa oo duugaa by dhaqdhaqaaq yar oo wareeg ah.
Ma ilaawin inaan si fiican u biyo raacino kadibna waan dhunkadeyn karnaa maqaarka sidaa darteed waa jilicsan.
Waxaan qabaa xitaa Waxaan soo iibsaday doonaa dhirta, maxaa yeelay, kulligiin mabda this, waa ay u fiican dhaqaalaha, cusub, madaadalo ah la samayn, si dabiici ah, waxaa ka baxo maqaarka super jilicsan (xataa maqaarka jilicsan iyo xasaasi ah waa faraxsan yahay) waxaan arag dhibco fiican!
Saaxiibo, haddii aad ogtahay cuntooyinka kale ee fudud sida sidan oo kale ha ka baqin, waxaan jeclahay mabda'a.
Waxaan jeclaan waxyaabaha fudud si ay u isticmaalaan sida aan mar walba heli jikada, cuntada aan adag halkaas oo lagu weydiiyo in aad: debeda, biyo, baking soda, dhoobo cagaaran ama khal kacay mashiinka mashiinka ah, laakiin waa wax aad u caajis badan oo la sameeyo ... 🙂
Waxaa laga soo xigtay: http://www.elishean-aufeminin.com/my-home-home-made-of-facilite-extreme/
Ololaha xasilinta qaranka ee ka hortagga kansarka ayaa la bilaabay
Halkaan waxaa ah 16 calaamadaha kansarka suuragal ah in badanaa la iska indhotiro ka hor inta aan la daahin